एनआरएनएको लडाइँ, कसको पर्ला पल्ला भारी ? | Safal Khabar
एनआरएनएको लडाइँ, कसको पर्ला पल्ला भारी ?
आइतबार, १० असोज २०७८, ०८ : २६
काठमाडौँ । कात्तिक ३ (अक्टोबर २०) मा हुन गइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने निश्चित भएको छ । चुनावका लागि अमेरिका निवासी रविना थापाले आफ्नो टीमसहित अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेकी छन् ।
अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कुल आचार्यले आइतबार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्न लागेकी छन् । त्यस्तै अर्का प्रत्यासी डा बद्री केसीले पनि काठमाडौंबाटै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
संस्थापन पक्षका निकट उम्मेदवार बद्री केसीलाई एनआरएनएकै केही प्रभावशाली व्यक्तित्व र एमालेको समर्थन रहेको छ भने कुल आचार्यलाई काँग्रेस र माओवादीको समेत समर्थन छ । उनलाई एमालेकै माधव नेपाल निकटस्थ एनआरएनएहरुको पनि भोट झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, काँग्रेस निकट नै मानिने रविनाको समेत उम्मेदवारी परेपछि एनआरएनएको चुनाव रोचक बन्ने निश्चित रहेको एक एनआरएनए अभियन्ताले जानकारी दिए ।
को हुन् रविना थापा ?
अहिले एनआरएनमा कुल सदस्य १ लाख ५ हजार मात्र रहेकोमा आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए संघको सदस्य संख्या १५ लाखसम्म पुर्याउने थापाले बताएकी छिन् ।
रविनालाई काँग्रेसकै एउटा समूहले साथ दिएको छ ।
थापाले यसपटक चुनाव जितिन् भने उनले एनआएनएको पहिलो महिला अध्यक्षको इतिहास रच्नेछिन् ।
कुल आचार्य को हुन् ?
आचार्यले आइतबार उम्मेदवारी घोषणा गर्नुअघि गृहजिल्ला पर्वत पुगेर आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । जसअनुसार उनले ८५ देशमा रहेका ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको भावनाअनुसार संस्थालाई मर्यादित र विश्वमै प्रतिष्ठित बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । प्रजातान्त्रिक खेमाकै एउटा समूहको साथ नपाए पनि कुल आचार्यले नेपाली काँग्रेसबाट संस्थागत साथ पाएका छन् । काँग्रेसले आचार्यलाई सघाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
डा बद्री केसी को हुन् ?
संस्थामा केसी सन् २००३ देखि निरन्तर छन् । डा केसी २००७ सम्म आइसीसी रुसको सदस्य थिए । २००७ देखि ००९ सम्म आइसीसी रुसको महासचिव भएर काम गरे । २००९ देखि दुई कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सदस्य भए । २०१३ –२०१५ मा कोषाध्यक्ष चयन भए । त्यसपछिका दुई कार्यकाल महासचिव र हाल कुमार पन्तको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष छन् । केसीले बायो टेक्नोलोजीमा मस्कोबाट २००१ मा पीएचडी गरेका छन् ।
वौद्धिक व्यक्तित्वका परिचित केसीलाई यसपटक केपी ओली नेतृत्वको एमालेले बलियो साथ दिने संकेत देखिए पनि एमाले फुटेका कारण केसीलाई एमाले समर्थकहरुको सबै भोट नझर्न सक्छ ।